Tag: kobcinta | Martech Zone
Tilmaamahaaga iibka Lead Follow Up Template
Muxuu yahay qorshahaaga weerar ee ku saabsan dabagalka raadadka iibka? Waxaan ka baqayaa inaan inta badan gaabinno… la kulanka himilo kadibna aan iska indhatirno dabagalka iyo inaan maanka ku hayno. Waa istiraatiijiyad adag in la helo iyo sabab wanaagsan oo loo maalgashado CRM iyo otomaatiga iibka sida macaamiisheena jooga Salesvue. MarketBridge waa shirkad ku takhasustay soo kabashada farqiga u dhexeeya suuqgeynta iyo iibinta si loo horumariyo shirkadda
Waxaan ka soo qaybgalay xaflad daahfurka dhowaan ah oo daabacaadda daabacan oo keliya ah oo ku saabsan dhaqanka cuntada ee Midwest. Markii aan lahadlayay kooxdii wax abuurtay, waxaa jiray sharaf aad uwanaagsan oo ka kooban labada nuxur, farshaxanka, iyo badeecada dhammaatay. Joornaalku wuxuu ahaa mid adag waxaadna dareemi kartaa tayada warqadda, waxaad uraysaa daabacaadda cusub, waxaadna dhadhamin kartaa cunnada sida hodanka ah loogu sharraxay joornaalka. Waxay igu heshay inaan bilaabo
Khadka Autoresponder Assembly
Arbacada, Maarso 13, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Wareeggaaga suuq-geyntu daruuri kama aha inuu raaco rajadaada 'wareegga iibsiga. Kaliya maahan in ololahaaga jadwal lagaa siiyo waqtiga qaldan, lagamana yaabo in layareeyo si loo bixiyo farriinta lagama maarmaanka u ah waqtiga si rajada looga dhigo macaamil. Qalabka qalabaynta suuqgeynta ayaa caan ka noqday suuqa maxaa yeelay waxay bixiyaan fursad lagu kobciyo macmiil xilli macmiilku doonayo in lala xiriiro. Ganacsiyo badan ayaa fursado u oggolaada